Andriamifidisoa Zo · Desambra 2015 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Desambra, 2015
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Desambra, 2015
Krismasy ao Japan? Mivonòna amin'ny hazo mihazakazaka, jiro mahajambena ary ny akoho mendy
Japana 26 Desambra 2015
Manana fomba manokana iavahany i Japan eo amin'ny fankalazana ny noely ka tafiditra amin'izany ny firentirentin'ny jiro, ny mofomamy mampilendalenda ary ny akoho voatono mafilotra.
Azia Atsinanana 24 Desambra 2015
Eny sy tsia. Afa-mankalaza any an-tranony sy any amin'ny toeram-pivavahana ny tsy-miozolomana. Ary araka ny fanehoan-kevitry ny mpiserasera iray, "Nahoana no izay lazaina ho 'fandrarana' ny krismasy ihany no mahatratra ny fampitam-baovao tandrefana amin'izao fotoana izao?"
Fanisanandro feno sary saka nalaza haingana tao amin'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana
Ny fanisanandro “Pretra + Saka” no valiny ataon'ny Rosiana Ôrtôdôksa amin'ny Calendario Romano Italiana, mampisongadina ireo pretra Katôlika tanora sady bôgôsy sy ny fanisanandro feno saka I gatti di Roma.